The ndabere nwoke ime mmụọ ọchịchọ | Apg29
Na m Olileanya amụma dere ede nke a, m na-etinye N'ilu Jizọs banyere "furu efu / återvunne nwa" (Luke 15) dị ka ihe atụ si, ihe afterimage nke gara aga narị afọ iri ihe.
Ma i nwere ike na-atụgharị ya gburugburu na-ekwu na m na-agbasaghị ilu dabeere na oge mgbe Jizọs chere n'ihu ya dị ka ihe nlereanya maka mgbe na-abịa ihe. Anyị ga-dị nnọọ na-n'uche na niile atụ ndị na-ezughị ezu. Ha na-enweghị ihe ọ bụla, na ha nwere ike ime n'ime ihe tracks karịa oge pụtara. Na mgbe ajụjụ nke Bible / okwu Chineke, na amụma ndị a odide kwajuru na ya, na ala, na na oyi nke 66 akwụkwọ. Ya mere, na-agụ Bible na Mmụọ Nsọ aran bụ ndị kasị dịrị nchebe ụzọ na-abata na nghọta nke Akwụkwọ Nsọ, dị ka Mọ na-enye ndụ na akwụkwọ ozi na asụsụ tent. (2 Cor 3: 6)
Na m ederede m aka Fall sụgharịrị ndị mmụọ ozi na "förhimmelska" na ya Ẹkot n'ime Ogige Ubi nke Iden nke ndị mmadụ. Ma na-emesi ike na nzọpụta nke ndị mmadụ site na Jizọs mgbaghara nke mmehie, karịsịa nnapụta dị ka a nloghachi "home 'Chineke. Chapter aha maka Luke 15: 11O amaokwu na-atụ, na-adabere nsụgharị nyere iche iche ihe karịrị narị afọ. Ilu nwere ike zoro aka na: "nwa mmefu", ma dị ka nke ọma dị ka "nwa mmefu". The isi nkewa, 1, 2, 3, wdg, wee ruo mgbe bụghị ruo mgbe 1228 na oge anyị - site na English ọkà mmụta okpukpe Stephen Lang na nkwado. The Bible akwụkwọ odide, ọ dịghịkwa metered isi na aga na amaokwu nkewa.
Ọ bụ Bible a ikop na-akpata ime mmụọ / okpukpe ọchịchọ n'etiti ndị mmadụ. Na mbụ, nwoke (1 Genesis 1-2) n'ezie a na-achọ nke divinity, ebe ọ bụ na di na nwunye mbụ, bụ Adam na Iv dịrị ndụ na ihe ọcha na-doro anya na Chineke kere ha na-ahụ Ogige Iden dị nsọ - a iche iche na iche akụkụ nke ala-eze Chineke ma na ịrịba eluigwe otuto. Adam na Iv nwere ike rie nke osisi ọ bụla dị n'ubi a, gụnyere "osisi nke ndụ", ma osisi nke ihe ọmụma "nke ọma na ihe ọjọọ", Chineke machibidoro iwu ha ka ha rie ma mee ọbụna aka. Ọ bụrụ na ha riri nke na osisi ha ga-anwụ ma mmụọ na corporeal uche; "Ọnwụ na-anwụ" (1 Gen. 2:16); anwụ "ọnwụ nke abụọ" (21: 8).
Ọ chọghi mgbe na nke ime mmụọ / okpukpe ọ bụla direction, ma si Adam na Iv n'akụkụ Chineke ma ọ bụ site na Chineke n'akụkụ ha, nke a na-adịghị mkpa na na ha bụ ndị ọnụ n'ogige. Ikwere na ha bụ akin ịtụkwasị Onye Okike maka ya na-elekọta na ọbụbụenyi ha. Esiri na-ekwu okwu, na ihe a yiri ụzọ ahụ dị ka a ọma mmekọrịta ezinụlọ. I ma ebe i nwe. Iche echiche maka ihe atụ nzube nke otú "furu efu / nwa mmefu" nwere ya tupu o wee pụọ n'ụlọ. E nwere, ke ufọk gburugburu ebe obibi, o nwere niile nche nwere ezigbo ọkụ nna ofufe, ezigbo nri, mma uwe, a ọtụtụ nke nnwere onwe na ikuku. Otú ọ dị, ihe onwunwe nketa na dina na-eche ya ka ọ bịa yiri ka malitere iji na-adọta ya. Ha ọbụna "machibidoro iwu" ego, bụ a siri ike ọnwụnwa. Iwe, ikekwe na-ekwo ekworo nke ya nwoke tọrọ, Ọ chọrọ wepụrụ ka ngụkọta nnwere onwe na-enweta "ụwa" n'èzí, iji nweta ukwuu "ihe ịga nke ọma" karịa n'ụlọ na ugbo. Ikekwe, ọ na-ebu na mpako anya dị otú ahụ n'uche. Fall nke nwere ike ekewet ya, bụ na ọ bụ "tupu" na-akpọ ya akụkụ nke nkwonkwo "nwa nketa" nke nna - onye ka na-eto na nwa free ga-eguzo: "Nna, nye m òkè m nke ala na ụlọ. Mgbe o kewara ya onwunwe n'etiti ha. Obere oge mgbe ndị na-eto nwa juru n'ọnụ ya nile wee n'ebe dị anya ka a mba ọzọ. " nye m òkè m nke ala na ụlọ. Mgbe o kewara ya onwunwe n'etiti ha. Obere oge mgbe ndị na-eto nwa juru n'ọnụ ya nile wee n'ebe dị anya ka a mba ọzọ. " nye m òkè m nke ala na ụlọ. Mgbe o kewara ya onwunwe n'etiti ha. Obere oge mgbe ndị na-eto nwa juru n'ọnụ ya nile wee n'ebe dị anya ka a mba ọzọ. "
Fall na Garden
Laghachi n'ogige Iden na ọdịda e (Ọnụ Ọgụgụ 3 1). Mgbe mmadụ abụọ dara maka Ọnwụnwa ahụ okwu, were nke mkpụrụ ahụ a machibidoro iwu osisi, rie ihe, iji "ịdị ka Chineke, mara ihe ọma n'ihe ọjọ," e rụrụ maka onye mbụ esiri oké ọnụ ahịa mpụ megide Chineke. Nke n'aka nke pụtara na, na-eji imagery nke a nwoke na-agaghị emerili ọdịiche ma ọ bụ impenetrable mgbidi bilitere n'etiti ya na Chineke. Mankind furu efu site na-adịghị anabata omume; na anụ ntị nzọụkwụ, ma ya adabako mmekọrịta ya na Chineke - biarue akuku ya ụgbọelu na ya dị ka ihe mmadụ na oge na nke ikike na ya. A "ime ọpụpụ", a "ịgba alụkwaghịm" na - dị nnọọ ka ọ mere - atụghị anya na-ezighị ezi pụta n'ihi na agbụrụ mmadụ.
The iro emetụta Adam na Iv ma mmụọ ahụ, uche na ahụ. Ihe niile bụ ihe a pụrụ ikwu na gbagburu ekochiela ihu, ụzụ na-arịa ọrịa. Okwu Hibru Chat (nke kwekọrọ na okwu Grik bụ hamartia), mmehie na Swedish, kụrụ na zuru ike nri n'ime ndi mmadu. Ma ụkpụrụ ọma (na Grik. Ethos, usoro iwu echiche) na mmụọ (nke lat. Moral, dị ka ihe na-egosi) - (ụkpụrụ ọma nwere ike na-akpọ omume esịtidem compass) - natara "mmebi", àgwà ọjọọ, na-eri ahụ, mmetọ, na ike ọ bụghị agwọ onwe ha. Pain, eyi na iro ga ọtụtụ n'ihe na-ọtụtụ nke mmadụ. The n'efu ka niile e kere eke na-agbawa na siiri "Juda" na "ọnyá". The ikuku mewere mkpatụ na ụgha, aghụghọ, ọjọọ, ikpe ọmụma, nchegbu, ocho oru, nchegbu, na-eguzogide, anya, owu na-ama, mmụọ ọjọọ na ndọrọ n'agha. The ala akara bụ ohu "nke ire ure,"
Oge ka n'ụzọ ihe atụ - na maka idozi - tụnyere "furu efu / nwa mmefu" na-ezighị ezi na ahụmahụ na ndị ogbenye mkpebi na "mba ọzọ". Life ọhụrụ ama na-malitere na - na ike ga-chere ka: a mma, fun, mara mma ma na mpako ụzọ. Ma, ọ bụ ka o di, na adịteghị: "E nwere, o duuru a dissolute ndụ na mikpuru ihe nile o nwere." On na-esonụ "ụnwụ", na-elekọta mmadụ na mwepu, bụ nke manyere ya na-eje ozi nke a ezi nwe. Ézì o nwere nche na-ebi n'etiti, pụrụ ọbụna na-anọchi ndị mmụọ ọjọọ ọrụ. Anyị na-agụ, n'ihi na ihe atụ, Mark 5: 12-13 banyere otú ndị mmụọ ọjọọ chọrọ ịbanye a ìgwè ezì nso mgbe Jizọs ga-amasị chụpụ ha nwoke ha nwere. A ọchịchọ Jizọs, kamakwa mma, dị nnọọ ka ndị mmụọ bụ ezì. Ha na-N'ezie N'ọtụtụ ebe na Bible na-egosi ezi na ezi omume, na-akọwa unyi na ime mmụọ. The ísì yiri n'ebe dị anya.
Anatara nke mmehie
Mgbe mmadụ abụọ dara maka "agwo" ọnwụnwa, ha bịara anyị na ọgbọ mgbe a agbụ, na-ebu na zutere ọnwụnwa chọrọ. Ka ihe atụ, mpako, ekworo, okwu ire ụtọ, ụgha, whitewash, ụgha, obi ilu, seduction, defamation, hedonism, omume rụrụ arụ, nhata, ike, ada, ihe ọjọọ na mgbaasị. Nke a na e weere na a search maka ọnwụ nke Chineke na nke furu efu Paradise. Mmekọrịta bụ "na-enweghị olileanya na-enweghị Chineke n'ụwa." (Ndị Efesọs 2:12) Bible na-egosi elu ọtụtụ ebe na omume rụrụ site ndị mmadụ n'ihi na nke Fall, na okwu a bukwanu ego e ji mara halyard n'ihi mmetụta. Na Galeshia 5: 19-21, ọ na-e biri ebi na ndepụta ụdị: "ọrụ nke anụ ahụ bụ doro anya: ịkwa iko, adịghị ọcha, orgies, ikpere arụsị, anwansi, ibu iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, själiskhet, esemokwu, ozizi nduhie, echiche ojoo, aṅụrụma, oriri oké mkpọtụ, na ndị dị otú ahụ. M na-agwa unu tupu ya emee ihe m na-ama kwuru, sị: ndị na-eme ihe ndị dị otú a ga-eketa alaeze Chineke. "
Ndị Rom 1: 29-32 cataloging: "Ha na-juputara n'ajọ omume nile, ajọ omume, anyaukwu, na echiche ojoo, ha bụ ndị jupụtara n'anyaụfụ, igbu ọchụ, arụmụka, aghụghọ na echiche ọjọọ. The asịrị na nkwutọ, ha kpọrọ asị Chineke na-eme ihe ike. The declaims na-etu ọnụ, ha na-zie ezie na ihe ọjọọ na-enupụrụ ndị mụrụ, nzuzu, enweghị okwukwe, ịhụnanya na-adịghị na heartless. Ha maara nke ọma ezi omume Chineke nyere iwu na ndị na-eme n'ụzọ dị otú a kwesịrị ọnwụ. Ma ha na-eme otú ahụ, na ha na-ekweta na ndị ọzọ na-eme ya. "Ya mere nnọọ na olileanya na-adịghị ihe ọjọọ ọ bụ, na otú ihe ọjọọ ọ bụ, dabere na Adam na Iv ọdịda si amara n'ime Ogige Ubi nke Iden - nwaa imebi dị ka ha bụ agwọ ahụ. Olee otú n'ime isiokwu, m ka na-achọ ime na ndọtị, na-na Bible Christian okwukwe, ọ ụlọ maka ụmụ mmadụ adịghị ike nke ndị kwere ekwe, n'echiche nke na Nnukwu Onye Nchụàjà anyị, Jesus,
Agwọ na Paradaịs
Ònye bụ agwọ ahụ na-aghọgbu Adam na Iv na Paradaịs? - Ọfọn, mgbe ahụ anyị na-aga azụ ka ihe ndị a na n'ihu "elekere oge" na ama ebe ụfọdụ ntụmadị n'ebe ndị dị n'eluigwe. N'oge Aịsaịa 14 Ezekiel 28, mere onye na-zuru na radiant angel dara n'ime mmehie na-ebili megide Chineke. Ọ na-ekwu, ihe ndị ọzọ na-agụ na ya obere ịgbà na flutes chọọ ya mma "na gold". Ma ọ bụghị afọ ojuju na ọkwá ya dị ka onyeisi "n'echebe" nke eluigwe, ma chọrọ a megalomaniac elu na ike - ruo mgbe ọ na-anọ dị ka eze on "gudaförsamlingens ugwu". Gịnị a ọdịda si amara nwere ike ime eme na eluigwe Bible na-enye anyị azịza ọ bụla. Ma, ọ bụ a mmerụ nke dị nsọ eluigwe okirikiri - otú iju ma omimi dị ka ọ pụrụ iyi - dị mkpa ka e weghachiri eweghachi site ọgwụgwọ nke Jesus 'wụsa-na àjà na ọbara,
Mmụọ ozi ụwa malite ịbụ na a na ọnọdụ na-ahọrọ n'etiti ya na Chineke. Ma mgbe ahụ ọ na-egosi na a atọ nke usu heaven họọrọ iguzo na Chineke na-emegide (Mkpu 12: 4). Tupu egofulle cherub mpụ megide Chineke, e kee dịghị mpi ma ọ bụ abụọ okporo osisi na-na mkpebi na okwukwe. Faith adịghị dị ka a onu. Nna, Nwa na ndị mmụọ ozi bụ ndị ọnụ na ịdị nsọ na ebube na-enweghị ọrụ pụrụ iche na onye ọ bụla ọzọ dị n'etiti ha. Ọ dịghị ihe ma ọ bụ megide Chineke ebe obibi dị. Ọ dịghị, eluigwe wee na-enweghị ihe ọ bụla njikọ ihe nwere ike kọwara dị ka ime mmụọ ma ọ bụ okpukpe. Ọ dịghị ocho oru, ma ọ bụ mgbe otu ma ọ bụ nke ọzọ ruo ụbọchị.
Ma na-ewe mpako mpụ nke lucifa. N'ihi ya, ihe nlereanya nke Fall n'ime Ogige Ubi nke Iden "kere" onye na-nwaa Adam na Eve - otú mmehie archetype. The ihe na gbapụrụ na Adam na Iv na uche ha maka n'efu, na na agbụrụ mmadụ wee na-dị iche iche e ji mara nke mmehie e mesịa - bụ ihe mbụ niile iberibe nke ndị mmụọ ozi-isi lucifa. N'ogige si otú a oyiri nke ihe mere tupu, dị ka a mirror image. Ọzọkwa, Jizọs na-kwupụtara dị ka ndị a na-John 10:10 onye iro Chineke: "Onye ohi na-abịa nanị na-ezu ohi na-egbu ma na-ebibi." Taa bụ ite ime, mmekọahụ mgbanwe na euthanasia bụ na ụmụ mmadụ na ikike omume mere na sayensị ọgwụ na madu aha, na-anwa na-emetụta mmepe nke mere na ọ interacts na kenyere aha "evolushọn". The /-anabata ndị ọbịa ike Enwee Mmeri.
Na a ga-eleghị anya-kegide na na ihe Jizọs kwuru na Jọn 8:44 banyere Fien-on: "Ọ bụ a na-egbu ọchụ site ná mmalite na mgbe guzo na eziokwu si-da, n'ihi na ọ dịghị eziokwu na ya. Mgbe ọ na-ekwu a ụgha, ọ na-ekwu abụghị na ya, n'ihi na ọ bụ onye ụgha, bụrụkwa nna nke ụgha. "Na 1 Jọn 3: 8, sị:" Ekwensu anọwo na-emehie site ná mmalite. " Agụ na-ekwesịghị iji na Bible dị iche iche ihe odide na-ahụ otú o wee bụrụ "ìhè," na-egbuke egbuke cherub n'etiti niile mmụọ ozi Nigeria eluigwe ụwa, nwere ike jupụta na mmehie na echiche na omume - eg dị ka igbu ọchụ na ụgha. I nwere ike na-eche nke a ma jide okwu na okwu na-ede banyere ya. Ma tulee otú wildly na ọ na-eduga emegideghị Bible nkịtị na isiokwu.
Akpata akpata agwọ ahụ n'akụkụ, o si nwaa Adam na Iv mehie - abụọ meworo usiene ya lucifa efunahụ ya nke dị ike ebube nke-isi nke Chineke, na iwe na ọ na-ẹsịn ke na ala si heaven n'ihi nnupụisi ha. Nke pụtara na o yiri wara mgbanwe / nkọcha ka "agwọ". Ma na-eche na nke a na ọtụtụ rụrụ aha na echiche nke Bible na-egosi ya dị ka: dragon, Setan bụ Ekwensu, Beelzebul, Leviathan, onye iro, mmegide, onye iro, na wolf na-amabughị. New aha e chepụtara dị iche iche ime anwansi-okpukpe ọha mmadụ na akụkọ ifo kemgbe ụwa. Dị ka ihe atụ: Marduk, Zeus, Samhain, Ahriman, The ezì, Shame, ekwensu na ekwensu.
Nyere agwọ asị na ihe niile Chineke kere na mere. Ndammana mmụọ ozi-isi Michael. Michael mere ejecting ya si n'eluigwe sị: "Ma e nwere agha n'eluigwe: Maịkel na ndị mmụọ ozi ya busoro dragọn ahụ. Na dragon agha na ndị mmụọ ozi ya, ma ọ bụghị ike zuru ezu, na e nweghịzi ihe ọ bụla ebe ha heaven "(Mkpughe 12: 7-8). The agwọ asị ubi na di na nwunye, n'ezie. Ma, ọtụtụ karịsịa, ọ chụpụrụ site ekworo nke Ọkpara, na nke mere ka ọ ya hatiske iro na onye iro. Ikekwe o uche ziri ezi ebe a ugbua na a ga-ọhụrụ nzukọ na Ọkpara Chineke, n'ikpeazụ, ihe imeri ke ọzọ tvekamper. Anyị nọ na ịsị obi na-adị tinyere ya na ọnwụ mgbe o nyere onwe ya iji nwaa Jizọs nọ n'ala ịkpa. Mkpughe 13: 8 na-enye anyị nke Jesus (eg Hedegårds translation): "Nwa aturu e gburu site na ntọala nke ụwa". N'ebe a, anyị nwere ụfọdụ otu ide Mkpughe, ma na breathtaking echiche n'etiti: Na otu aka otú a: na Ekwensu anọwo na "a na-egbu ọchụ" site ná mmalite, a mmehie "site ná mmalite". N'aka nke ọzọ, mgbe Chineke nwa na-egbu "site na ntọala nke ụwa".
a na amụma
Ọzọ, anyị ewere ya mfe na nkọwa ndị a akụkụ Akwụkwọ Nsọ, mgbe echiche banyere ihe ọ bụla akụkụ ma ọ bụ oge, nke na-emetụta okwu "mmalite", "site ná mmalite", "site na ntọala nke ụwa". Ha nwere ike na otú abụ ihe a oge mgbe Chineke kere nke ụwa e mebeghị, ma ọ bụ nwere na-eme na ọnọdụ ụwa na e kere eke nke Paradise. Na anyị nwere ike ịbụ mara mma n'aka nke bụ na "ndị egbu" banyere amụma, mgbe ahụ, anya-emezu, ma na obe nke Calvary anya emezu. Agbanyeghị na 1 Gen 3:15 Chineke na-esetịpụ Agwọ n'ihu a forthcoming eziokwu: "Ọ (nwa m) ga-etipịa gị isi, ị ga-egbu ya n'ikiri ụkwụ." Ná Mkpughe 12:12 ọ na-agụ: "Ṅụrịa ọṅụ n'ihi ya, unu elu-igwe na gi onye bi n'ime ha! Ma ahụhụ ga-adịrị ụwa na oké osimiri, n'ihi na ekwensu na-gbadata si unu, oké iwe, n'ihi na ọ maara na oge ya dị mkpirikpi. "Martin Luther bụrụ abụ ma na-egwuri na 1529 maka oge mbụ ya ezi fictional ukwe," A Dike Ebe e wusiri ike bụ Chineke Anyị "(Nke 237 na Swedish hymnal):" Prince of Darkness arịdata egwu na iwe, ọ na-akwadebe förvisst na ime ihe ike na argan idebe ... "o yiri ihe fọrọ nke nta ka nwa Chineke nsọ ya ọrụ, ime mmụọ agha na ndị dara oké mmụọ ozi n'eluigwe, na ndị na-esi nke mmehie maka ọdịnihu nke ihe a kpọrọ mmadụ, bụ ndị ga-eso na Ruth nke ọpụpụ - ama ayak adịghị ahụ anya na amụma "gburu"; Ọkpara ahụ, Nwa Atụrụ ahụ bụ ugbua na lucifa agha weere nke elu-igwe. ọ na-akwadebe förvisst na ime ihe ike na argan warara ... "O yiri ihe fọrọ nke nta ka nwa Chineke nsọ ya ọrụ, ime mmụọ agha na ndị dara oké mmụọ ozi n'eluigwe, na ndị na-esi nke mmehie maka ọdịnihu nke ihe a kpọrọ mmadụ, bụ ndị ga-eso na Ruth nke ọpụpụ - ama mere onwe ya adịghị ahụ anya na amụma "gburu"; Ọkpara ahụ, Nwa Atụrụ ahụ bụ ugbua na lucifa agha weere nke elu-igwe. ọ na-akwadebe förvisst na ime ihe ike na argan warara ... "O yiri ihe fọrọ nke nta ka nwa Chineke nsọ ya ọrụ, ime mmụọ agha na ndị dara oké mmụọ ozi n'eluigwe, na ndị na-esi nke mmehie maka ọdịnihu nke ihe a kpọrọ mmadụ, bụ ndị ga-eso na Ruth nke ọpụpụ - ama mere onwe ya adịghị ahụ anya na amụma "gburu"; Ọkpara ahụ, Nwa Atụrụ ahụ bụ ugbua na lucifa agha weere nke elu-igwe.
Lucifa na-enwe na-ahọrọ dị ka "eluigwe" Ormväsendet, anọ agbazinye na nedkastanden ma ọ bụ bortgåenden - na ubara mmeri maka onye ọ bụla "nzọụkwụ":
1. Sinụ nke elu-igwe ka ndị dara angel "lucifa": "Ndien dragọn ukwu ahụ, na ndị agadi agwọ, na-akpọ Ekwensu na Setan, ma na araba ụwa dum, e ẹsịn ala n'ụwa, ya na ndị mmụọ ozi nọ n'akwatughị ya." ( 12: 9)
2. Dị ka agwọ nke na paradaịs elu ala (anya akụkụ nke alaeze Chineke, ma na n'ebube eluigwe) - eleghị anya mgbe Adam na Iv ekwe n'aka ya. 3. Site na ọnọdụ nke Ọkàiwu / Satan Chineke (ebe na eluigwe na mpaghara) onye nke Chineke, Job (2: 7), sị: "ọkàiwu / Satan kpafue site n'ebe Chineke, tie Job na sore Juda si n'ọbụ ụkwụ si ya okpueze." nke a ebubo bụ nke Up 12:10 juru: "ebo ụmụnne anyị a chụdawo, nke ehihie na abalị ebubo ha n'ihu Chineke anyị." N'ihi ya, "Simon, Simon! Satan jụrụ (nwetara ma, ndị ọzọ trans.) Iji ifucha unu dị ka ọka wit. "(Luk 22:31)" Asua ekwensu-ejegharị dị ka a na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa. "(1 Peter 5: 8) "Setan n'onwe ya na-ghọọ otu mmụọ ozi nke ìhè." (2 ndị Kọrint 11:14) 4. ka hell (Mkpughe 20:10)
Rịba ama na Jizọs na-na-agụnye anọ nkebi, ngụkọta iche, site na mbilite n'ọnwụ, na a na-eto eto na mmeri na ebube nke ọ bụla larịị:
1. Up si n'ili (Hedis) mgbe ọ nọ na Mmụọ Nsọ kwusara ozi ọma mmeri ya na Calvary ebe (1 Peter 3:19). 2. kpọlitere ndị nwụrụ anwụ, na nke n'ili: "Ya mere, obi m na-ụtọ na m ire na-aṅụrị ọṅụ, ee, ọbụna ahụ m ga-ezukwa ike na olileanya na ị ga-ahapụ m n'ili ma ọ bụ ka gị na Onye Nsọ hụ ire ure." (Ọrụ 2:27). 3. Up Nna maka ito n'ihu onye ọ bụla ya, "Jizọs sịrị ya (Mary Magdalene): 'Rör bụghị metụ m aka, n'ihi na m na arịgobeghị Nnam. Ma gaa ụmụnna m, sị ha, m irigo rue Nna m na Nna unu, na Chineke m na gị Gud. ' "). (John 20:17), n'oge na mgbede otu ụbọchị na-egosi uku Jesus maka eso ụzọ akpọchi onwe ha n'ihi egwu nke ndị Juu (20:19). N'ebe ahụ, ọ na-egosi na ha ma ha sårmärkta aka na ụkwụ, na ya mara ube n'akụkụ. Lee, e nwere ajụjụ ọ bụla ma ka ha ghara imetụ ya aka. Na ụbọchị asatọ gasịrị, Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ Thomas ka mkpịsị aka ya na aka ya na ya n'akụkụ (20:27). 4. The rịgoro nke n'akụkụ Nna: "Ọ na ha dugara na (na-eso ụzọ) si Betani, o wee chịlie aka ya ma gọzie ha." (Luke 24:50) "Ebe Jizọs gwara ha, ọ na-natara n'elu-igwe, na nọdụ n'aka nri nke Chineke. "(Mk.16: 19)
Nụrụ ma hụ
Na ya a ma ama na ịchọ ọdịmma onwe na ihe ọjọọ àgwà iyi na mberede agwọ na "ala" Ogige Ubi nke Iden. Na-achọpụta na Adam na Iv ma nụrụ ma hụ na agwọ. N'ezie ma kwuo okwu ma ọ bụ ihe ziri ezi na ọnọdụ. Asụsụ e ji Paradise, anyị na-amaghị nke Bible. Ọ pụrụ ịbụ a pụrụ iche "paradise asụsụ" nwụrụ ji nwayọọ nwayọọ. Otu n'etiti asụsụ eleghị anya, dị ka dị ka ọ na-ekwu ná 1 Ndị Kọrint 13: 1: "Ọ bụrụ na m na-ekwu na ndị ikom na ndị mmụọ ozi." Ma, ọ na-egosipụta echiche na ọ bụ a ụdị ụzọ asụsụ ọzọ Hebrew asụsụ ndị Juu ka na-azara ọnụ, nke nwere ike ibu a eziokwu (ma ọ bụ onyere site Chineke) site na nwa Noa bụ Shem (Semites), nwa-ya Iba (Ndị Hibru ), mgbe ahụ, nke isii mgbe e mesịrị Abraham, nwa ya Aịzik, bụ nwa ya Jacob (Israel),
Na a na-ekwu na ọ bụ na-akpali iji na-edebe na mgbe Iju Mmiri nke ụbọchị Noa niile na-ekwu n'ụwa otu asụsụ (1 Gen. 11). Mgbe Chineke ihere asụsụ, n'ihi na nke ndị mmadụ na-ewu Ụlọ Elu Bebel, nke mere na ọ dịghị onye ghọtara ndị ọzọ, bụ ebe maka ntoputa nke asụsụ Hibru. Ọzọ chere na ohere banyere inception nke Hibru, enyeghị aha Iba (Heb. Ibrim) ime na-enweghị ebe Hebron (Heb. Ivrit) na Abram rutere n'ala Kenan. N'ime Orthodox Judaism Hebrew were dị ka ihe dị nsọ. Ọbụna Kraịst Ndị Kraịst chọrọ n'anya Hebrew ahụ.
Mgbaasị "ire '
Ọ na-e ventilated azụ na-apụta n'ime Kraịst banyere Satan ịghọta mgbe anyị nọ na Mọ Nsọ, ịsụ asụsụ (Greek. Glossolalia). The ajụjụ nwere ike ghara inwe a azịza doro anya. The Bible na-akọwa ya eziokwu na "anyị na-ekwu ihe nzuzo," na-ekwu okwu na asusu di iche asugharia site Mmụọ Nsọ nke Chineke. Dị ka ọ na-ekwu na 1 Ndị Kọrint 14: 2: "Ọ bụ onye na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche na-adịghị asụ ka ndị ikom ma na Chineke. Ọ dịghị onye na-aghọta ya mgbe ya na mmụọ na-ekwu ihe nzuzo. "Ọzọkwa, Ndị Rom 8: 26-27" Ya mere, nke Mmụọ Nsọ na-enyere anyị na anyị adịghị ike. N'ihi na anyị maara na ọ bụghị ihe anyị kwesịrị ikpe ekpere maka, ma mmụọ ya intercedes anyị na asụ ude nke na-enweghị okwu, na Onye na-enyocha obi maara ihe uche nke Mmụọ, n'ihi na Mọ Nsọ na-ekpe ekpere maka ndị nsọ, dị ka Chineke na-achọ. "
Ma mgbe anyị na-adịghị ekwu okwu ndị ahụ na-eziokwu na e nwere ike ịbụ ụgha asụsụ. O nwere ike ịbụ, na-abụkarị otu ihe ahụ dị ka, ndị Kraịst na-ekwupụtara mmehie ekwe ịchọ ọdịmma onwe ịchịkwa okwu asụsụ dị iche iche. Ma o doro anya nwekwara ike ndị mmụọ ọjọọ na-agha weghara na-ekwu okwu na asụsụ nile pụta, ma ọ bụrụ na e nwere na-nādaghachi azu na nonchalance, na akpachapụghị anya na-egwu dị ka a N'ihi. Occultist-ekwu okwu "asụsụ dị iche iche" na ọdịdị okpukpe, Satanists eme, ọhụrụ-afọ ndị mmadụ na-eme ya. Ee, ọbụna oké okpukpe nke Tao, okpukpe Buddha na okpukpe Hindu, e. Na nke a emee n'okpuru ndị mmụọ ọjọọ mmetụta. Ọ na-eleghị anya kpamkpam e si na ikuku, ọ pụrụ esiwo na dị ka Beal-amuma n'Ugwu Kamel na ha agha megide amụma Chineke bụ Ịlaịja: "Mgbe ọ na-ehihie, ha na-jide site (anwansi, m dee.) Amụma ọnụma na ẹkenịmde na ruo mgbe ọ bụ oge maka àjà ọka. "(1 Eze 18:
ziri ezi postcho
The oge ọjọọ pụtara na Ogige Ubi nke Iden na osisi nke ima ezi ihe na ihe ọjọọ, ọ bụghị naanị na agwọ na a ime mmụọ anya udi, agwọ, ma o were na-ji a anụ ahụ agwọ ụmụ anụmanụ. Lucifa, Satan, ekwensu, dragọn ahụ, Leviathan, pụtara na guise nke a agwọ, ma na mgbakwunye: o nwere ziri ezi postcho. Ihe na eleghị anya mere ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na Adam na Iv ka a nwaa. Mgbe ahụ, Chineke nwere ike obibi agwọ, na oriri na guise nke agwọ, na-agụ ederede na 1 Genesis 3:14: "Mgbe ahụ kwuru na Jehova Chineke serpent'Eftersom i mere ihe a, ị ga-bụrụ ọnụ n'elu niile ehi, na anụ ọhịa anụmanụ. -Gi afọ ga-i na-aga, na ụwa ga-ị na-eri ka ogologo dị ka ị na-menjuobi. ' "Dị ka a Itie nke" reverb "ikekwe, Eze ajụala nwere ike na-eto eto isii mita ogologo ma na-ruo a atọ nke ogologo ya. Agwọ Charmer Aims agwọ ga-ebili. N'ebe ọwụwa anyanwụ ime mmụọ dị adị a dị ịrịba ama yoga ahụmahụ - Kundaliniormen. A ime mmụọ agwọ pụtara ihopslingrad edina ala na ike nke mmadụ. N'oge na-atụgharị uche, agwọ nwere ike na-agba ịnyịnya na ya, na-amalite ime ka elu na ịtụgharị uche na-eso tinyere ọkpụkpụ azụ site a ime mmụọ ọwa usoro, a na-akpọ meridians. Popular ma dị ize ndụ na-eche n'echiche, m na-ezisa.
Ọ bụ na o siri ike mfe maka mmadụ abụọ ghara ịda ọnwunwa, mgbe ahụ snakelike kwuru okwu. Ma e nwere a ike n'ihi na ụmụ anụmanụ na ndị mmadụ site na asụsụ na-ekwurịta okwu ọ bụla ọzọ na Paradaịs, anyị nwere ike site na onodu ma ọ bụ na Bible adịghị enyekarị-gwara. N'eziokwu gwa ịnyịnya ibu e mesịrị na Akwụkwọ Nsọ akụkọ nke amụma bụ Belam, onye gafere n'okporo ụzọ nke orure megide Israel (4 Exodus 22). Ma amaokwu 28 kwuru, sị: "Jehova meghere ọnụ ịnyịnya ibu, o wee sị Balaam'Vad ka m mere gị, n'ihi na ị ugboro atọ tie m?" Balaam zara inyinya-ibu, 'Ị na-mere a-nzuzu nke m! Ọ bụrụ na m nwere a mma-agha n'aka m, m ga-ugbu a gburu igwu. 'The ibu si Balaam,' Ọ bụ m gi inyinya-ibu, ị gbakọrọ niile ndụ gị ka ụbọchị ahụ bụ? Ma m mgbe na-eme na gị? "O wee sị: 'Nej.'"
Olee otú ọ bụ na asụsụ ike na-eme n'ọdịnihu udo nke alaeze Israel, na na mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na ụmụ anụmanụ, anyị na-enweta ọ bụla doro anya akwụkwọ. Ma dị ka Aịsaịa 11: 8, na-esonụ anyị fọrọ nke nta enweghi ike ime mmekọrịta-adị: "An nwa ọhụrụ ga-egwu na Aju oghere, a kwụsịrị ara nwa iru eru ka imebi agwọ anya." Otu abalị na a obodo dị na Uganda na 1992, m edemede ke ụlọ pitch ọchịchịrị nke ọ nụrụ olu aṅụrị na ụdị nke ala n'èzí n'ọnụ ụzọ m. Dị ka ọ na-adịghị anya weturu obi ala, m kpebiri na m na-agbalị na-aga azụ na-ehi ụra. Ụtụtụ, m mụtara na n'abalị, ndị nche iji ha flashlights ama chọpụtara na a nnọọ agwọ ọjọọ na-aga n'ime ụlọ m n'oghere na ala nke ọnụ ụzọ sill. M nwere agwo ahu image egbu.
Ọfọn, na ha search ọrụ agwọ dị ka mmadụ ná ndụ ha - na eziokwu nke mmehie, na mberede choputara Adam na Iv na ha "gba ọtọ". Ihe dị oké mkpa na-adịghị mma ka mere na niile etoju, ha spirit, uche na ahụ. Ọbụna ebe ha bụ ndị ahụ njikere maka mmekọahụ, nke ga-eduga na Mgbasa nke agbụrụ mmadụ. Ma nke a anụ na-akpachi anya na-egosi na a na-echebe site a ụdị nke ịdị nsọ na ebube Chineke, dị ka ihe atụ anyị na-agụ na 1 Genesis 2:25: "Ma ndị nwoke na nwaanyị gba, na ha chere na ọ dịghị ihere n'ihu onye ọ bụla ọzọ." Adam na Iv oge na-ezo ezo site na Chineke n'ime Ogige Ubi nke Iden, tupu ya nwere ike na-akpọ na ime mmụọ / okpukpe achọ na-ebilite. Na ọ bụ Chineke malitere, sị: "Ma Jehova Chineke na-akpọ nwoke ahụ wee sị ya: 'Var ị?'."
Ọ bụ ezie na Adam na Iv wee n'ihu Chineke, ya mere ha na-ezo na na ezo nke ihere n'ihi na gba ọtọ - na mgbe ahụ ata ụta ọdịda na onye ọ bụla ọzọ na nke ọ na e duhie agwọ ya. Chineke nyere ha uwe akpukpọ nke mere na ha nwere ike izo ahụ ha ọtọ, pụtara bụghị mere na ha ozugbo hapụrụ ọ bụla "nchebe" ime mmụọ ha ọtọ. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọdịda rụpụtara a Mmaji nudity. All n'ime ha ghọrọ "ọtọ", gbaa ya ọtọ, agbụ, efu na naanị. The usoro na-agwụ na Chineke "we zilaga" Adam na Iv si n'Iden na-etinye änglakeruber "nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ" ndikpeme ụzọ osisi ahụ nke ndụ. Eleghị anya iji gbochie ma na-echebe ndị ugbu a mehie ewekarị ndị mmadụ si na-abanye na ịnweta osisi nke ndụ, na-eri mkpụrụ ya na-ebi ndụ ruo mgbe ebighị ebi - ma na emeghị mgbaghara mmehie. Ugbu a na-etinye mmụọ / okpukpe ọchịchọ malitere na zuru ike. N'ihi na ụmụ mmadụ mbụ bụ na-agbalị ịchọta ụzọ ha azụ Chineke na ha na-efu ha Community. Na site ná nduzi Chineke abụghị n'elu. Ee, ugbu a ọ malitere na songs of ukwu. A Bible ngalaba e mere na-agụ, sị: "Jehova siri n'elu-igwe na ụmụ mmadụ nke na-ahụ ma ọ bụrụ na e nwere onye ọ bụla na-aghọta, ọ bụla na-achọ Chineke." (Abụ Ọma 14: 2)
N'otu oge ahụ na Adam na Iv pụrụ ịhapụ Paradise, ifufe ma ọ bụ crawls nwekwara agwọ si. Ọ wee na ma jiri nwayọọ pụta. Ma, nke ahụ apụtaghị na ọ na-n'anya na e kere eke nke Chineke ma ọ bụ ụmụ mmadụ. Ikekwe ghọọ ndị ọjọọ reptilian (nke lat. REPTILIS, "na-akpụ akpụ") chụpụrụ Paradise ubé tupu mmadụ abụọ, ma na-echere ha na mpụga nke ha echiche ojoo na na ọhụrụ ọnwụnwa. Pọl na-ede a ịdọ aka ná ntị ndị Kọrint (2 11: 3): "Ma egwu na dị ka agwọ ya aghụghọ duhiere Iv, otú kwesịrị uche unu ga-ọfọnde adajụwo mikroskopu ezi ma dị ọcha na-asọpụrụ Christ."
Ọ bụ n'ebe a na akwa mmụọ ọchịchọ na-ebilite n'ihi na a kpọrọ mmadụ. Agụụ maka "furu efu paradise" maka zuru udo na Chineke ọzọ, na Chineke na-adịgide adịgide mmetụta na ụmụ mmadụ, a hụrụ na-eme n'ọdịnihu, n'ihi na ihe atụ, Ecclesiastes na okwu (3:11): "Ọzọkwa mgbe ebighị ebi, o tinye obi mmadụ. Ma ha enweghị ike ịghọta ọrụ nke Chineke, site ná mmalite ruo ọgwụgwụ. "
The ego okpukpe, na ma ọ bụ na-enweghị kpọmkwem mgbaasị ọcha, na-eche na Adam na Iv mgbe ha na-apụta nke Paradise ịta ahịhịa. "Nkwenkwe nke ndị mmụọ ọjọọ" (1 Tim 4: 1), na njehie iche iche, na bịara anya "ọdụ ụgbọ mmiri" n'ebe ọwụwa anyanwụ si eguzo nwamba na nkịta. Ha nwoke mbụ, Cain okpukpe achọ, bụ ụgha ka Chineke, na-enwe mmetụta dị ka ọ bụ agwọ ahụ na ọ ka ya onwe ya ghọgburu ịchụrụ Chineke na-ezighị ezi na egotrippat ụzọ. Mgbe nwanne ya nke nta Abel-anapụta ya àjà nye Chineke, dị ka e mere na ikwere na Chineke, ma na-eduzi ezi ndị na obi umeala. The pụta bụ na Chineke nabatara Ebel chụrụ ma ọ Ken, bụ nke n'aka nke dugara Cain ọjọọ ya nyefe gbuo nwanne ya. Na 1 Jọn 3:12 bụ ihe a merenụ elu dị ka a akpan akpan atụ, nke na-adịghị dị ka Ken, "nke bụ ihe ọjọọ otu nwa ma gbuo nwanne ya. Na ihe mere Ken gburu ya? Ọfọn,
Dị ka ilu nke furu efu / nwa mmefu rụrụ dị ka a post Atụ - otu maka nri - ka ọdịda n'ime Ogige Ubi nke Iden na corollary nke ahụ, ọ nwere ike kwuru na nwa malite a "dissolute ndụ na mikpuru ya ihe onwunwe." On ya soro na ya, dị ka a na oké ụnwụ dara n'elu ala, nyere onwe ya na sinker ka a ohu a ezi nwe n'ebe ahụ, ọ dịkarịa ala na-ihe ka ha rie, ma ọbụna ezi nri, ọ na-ewere. Ezì nwe, onye bụkwa ohu ọkwọ ụgbọala, bụ na ihe oyiyi mgbe akin ka Beelzebul, "onyeisi ndị mmụọ ọjọọ (ezi, m dee.)" (Matiu 12:24).
Chọọ nzọpụta nke Jehova
Na ime mmụọ a bụ eziokwu bụ, anyị dị ka ndị mmadụ taa. Ka anyị na ntuli aka n'etiti villoläriga na n'eziokwu, n'etiti ezi ihe na ihe ọjọ, n'etiti mmehie na ezi omume na - họrọ ọma, na-ahọrọ nri, họrọ ya ugbu a. Ghara ime ekweghị na Chineke, evolutionism, madu na anwansi. Ma na-achọ naanị Jehova, bụ Onye Okike na Onye Nzọpụta na ezi ndị na-ahụ n'anya "ihu": "Ndị na-achọ m na ha chọta m." (Ilu 8:17) "Ndị na-achọ Jehova ha na-aghọta ihe niile." (Ilu 28: 5) "Chọọ mbụ ya alaeze ahụ na ezi omume. "(Matiu 6:33)" ndị ọnaụtụ na ndị mmehie na-aga Jesus. "(Luke 15.1)" Chọọ m, ị ga-esi bie ndụ. "(Emọs 5: 4)" Chineke bụ ihe ọma na mkpụrụ obi na-achọ ya. "" Ọ na-agọzi ndị na-achọ ya. "(ndị Hibru 11: 6)
M ikwubi site n'ịchọpụta na dị na Bible, na ebe mmehie jupụtara, ebe eruba nke Chineke frälsningsnåd ọbụna karị. Fall na ya pụta na-egwu na ukwuu. Ma mgbaghara na-arụ ọrụ site na nke Ọkpara, na Onyenwe anyị Jizọs, bụ ihe magburu onwe na ọbụna ihe omimi ha imewe na n'uche. The ikpe bụ nnukwu, ma mweghachi dị ukwuu, nke ukwuu ka ọ bụ. "Eziokwu (Jesus) ga-eme ka ị na free." (John 8:32) "Ọ bụrụ na Ọkpara na-eme ka ị na free, ị bụ n'ezie free." (John 8:36) "Onye na anyị nwee mgbapụta (site na ihe ọjọọ) na nwere mgbaghara nke mmehie anyị. "(ndị Kọlọsi 1:14) Jizọs aghọwo" anyị ezi omume "(1 Cor 1:30) n'iru Chineke.
Chineke mgbaghara ma ná mma ya na ya na nwoke akakabarede, na-ewe ebe kpọmkwem na ekpere n'aha Jizọs na ya: Welcome n'ụlọ, ndị ọzọ okwu! Ike nke ozi ọma, mgbe ahụ na-eme stepwise, usoro-dị ka, ruo a full mweghachi si n'ọchịchịrị, ọnyá, n'elu aka, dependency - ihe mmehie di na nwunye na depredations mere. Pita kwusara na Ọrụ 2:40 na okwu bụ: "Ka gị n'aka gbochiri (rụrụ arụ / ọjọ) ọgbọ." Nkwusa Pọl na Ọrụ 17:30 na ọ bụ oge ichegharị ime mmụọ / okpukpe "amaghị". Were dị ka ihe oyiyi nke "furu efu / nwa mmefu" laghachi Nna: "O guzoro na-eje ije (search n'ụlọ) na nna ya." (Anyị ga-amaghị banyere ihe mere mgbe nwa-ya si ke ufụn ke ezì nwe. ) nna n'aka ama si na-ele anya maka nwa-ya, n'ihi na onye ọ bụla iji anyị na-amaghị. Ma o nwere ike hụ ya "nchegharị" nwa site n'ebe di anya, ebe ọ na-ezì esi ísì, shabby na-etisasị etisasị abịa na-awagharị awagharị na ụzọ home: "Mgbe ọ ka dị anya, nna ya hụrụ ya ma nwere ọmịiko ya. The nna ọsọ izute ya, we dakwasi ya n'olu wee susuo ya ọnụ. "
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ abụọ na ntụpọ akụrisị ebe a, na otu aka, James 3: 8: "Bịaruonụ Chineke nso, ọ ga-abịarukwa unu nso." Ma na aka nke ọzọ, Mkpughe 3:20: "Lee, m guzo n'ọnụ ụzọ na iku aka. Ọ bụrụ na onye ọ bụla anụ olu m ma ga-emepe ụzọ, m ga-abịa ya iri nri na-ya, na enye m. "Nwa, nkwupụta mmehie," Emehiewo m, "na-egbo mkpa nke na-erughịrị mmadụ amara," Abụ m agaghịkwa kwesịrị ịbụ akpọ nwa gị ", na-eduga ná ọtụtụ nzọụkwụ ke usoro hemkomstens:" ma nna ya sịrị ndị ohu ya: ngwa ngwa na-ewetara ndị kacha mma uwe mwụda ma tinye ya na ya ma na-etinye a mgbanaka ya n'aka na akpụkpọ ụkwụ na ụkwụ ya! Na-enweta fatted nwa ehi ma na-egbu ya, ka anyị rie ma na-aṅụrị. Nwa m nwoke a nwụrụ anwụ ma dị ndụ ọzọ, + ọ furu efu na-achọta. Na party malitere. "Site ọchịchịrị ìhè agwọ isi bụ banyere na-kpam kpam (Rome 16:20). Satan ga-adịghị anya näpsas ruo mgbe ebighị ebi. Mmụọ ajọ omume ga-emecha-enwe mgbe nile ejighi ngwaogu. N'ihi na dara ndị mmụọ ozi e nweghị nzọpụta. Setan na ndị minions na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga hell. Ma n'ihi na a onye nwere okwukwe, okwukwe na a ụzọ na-ama na-eweghachiri Chineke, na ike na-asị dị ka Pọl na 2 Timoti 1: 2: "Amaara m onye m kweere." Na Ndị Rom 8:16: "Mmụọ na-agba àmà na anyị mmụọ nke na anyị bụ ụmụ Chineke." Anyị bụ ndị "a ememme ìgwè mmadụ, a ọgbakọ nke ọkpara nwere aha ha e dere heaven" (Ndị Hibru 12:23). "Ma ị bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà bụ, mba dị nsọ, a peculiar ndị mmadụ na-ekwusa ya dị ebube na-eme nke na-enye na-akpọ unu n'ọchịchịrị n'ime n'ìhè ya dị ebube." (1 Pita 2: 9) Satan ga-adịghị anya näpsas ruo mgbe ebighị ebi. Mmụọ ajọ omume ga-emecha-enwe mgbe nile ejighi ngwaogu. N'ihi na dara ndị mmụọ ozi e nweghị nzọpụta. Setan na ndị minions na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga hell. Ma n'ihi na a onye nwere okwukwe, okwukwe na a ụzọ na-ama na-eweghachiri Chineke, na ike na-asị dị ka Pọl na 2 Timoti 1: 2: "Amaara m onye m kweere." Na Ndị Rom 8:16: "Mmụọ na-agba àmà na anyị mmụọ nke na anyị bụ ụmụ Chineke." Anyị bụ ndị "a ememme ìgwè mmadụ, a ọgbakọ nke ọkpara nwere aha ha e dere heaven" (Ndị Hibru 12:23). "Ma ị bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà bụ, mba dị nsọ, a peculiar ndị mmadụ na-ekwusa ya dị ebube na-eme nke na-enye na-akpọ unu n'ọchịchịrị n'ime n'ìhè ya dị ebube." (1 Pita 2: 9) Satan ga-adịghị anya näpsas ruo mgbe ebighị ebi. Mmụọ ajọ omume ga-emecha-enwe mgbe nile ejighi ngwaogu. N'ihi na dara ndị mmụọ ozi e nweghị nzọpụta. Setan na ndị minions na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga hell. Ma n'ihi na a onye nwere okwukwe, okwukwe na a ụzọ na-ama na-eweghachiri Chineke, na ike na-asị dị ka Pọl na 2 Timoti 1: 2: "Amaara m onye m kweere." Na Ndị Rom 8:16: "Mmụọ na-agba àmà na anyị mmụọ nke na anyị bụ ụmụ Chineke." Anyị bụ ndị "a ememme ìgwè mmadụ, a ọgbakọ nke ọkpara nwere aha ha e dere heaven" (Ndị Hibru 12:23). "Ma ị bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà bụ, mba dị nsọ, a peculiar ndị mmadụ na-ekwusa ya dị ebube na-eme nke na-enye na-akpọ unu n'ọchịchịrị n'ime n'ìhè ya dị ebube." (1 Pita 2: 9) Setan na ndị minions na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga hell. Ma n'ihi na a onye nwere okwukwe, okwukwe na a ụzọ na-ama na-eweghachiri Chineke, na ike na-asị dị ka Pọl na 2 Timoti 1: 2: "Amaara m onye m kweere." Na Ndị Rom 8:16: "Mmụọ na-agba àmà na anyị mmụọ nke na anyị bụ ụmụ Chineke." Anyị bụ ndị "a ememme ìgwè mmadụ, a ọgbakọ nke ọkpara nwere aha ha e dere heaven" (Ndị Hibru 12:23). "Ma ị bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà bụ, mba dị nsọ, a peculiar ndị mmadụ na-ekwusa ya dị ebube na-eme nke na-enye na-akpọ unu n'ọchịchịrị n'ime n'ìhè ya dị ebube." (1 Pita 2: 9) Setan na ndị minions na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga hell. Ma n'ihi na a onye nwere okwukwe, okwukwe na a ụzọ na-ama na-eweghachiri Chineke, na ike na-asị dị ka Pọl na 2 Timoti 1: 2: "Amaara m onye m kweere." Na Ndị Rom 8:16: "Mmụọ na-agba àmà na anyị mmụọ nke na anyị bụ ụmụ Chineke." Anyị bụ ndị "a ememme ìgwè mmadụ, a ọgbakọ nke ọkpara nwere aha ha e dere heaven" (Ndị Hibru 12:23). "Ma ị bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà bụ, mba dị nsọ, a peculiar ndị mmadụ na-ekwusa ya dị ebube na-eme nke na-enye na-akpọ unu n'ọchịchịrị n'ime n'ìhè ya dị ebube." (1 Pita 2: 9) "Mmụọ na-agba àmà na anyị mmụọ nke na anyị bụ ụmụ Chineke." Anyị bụ ndị "a ememme ìgwè mmadụ, a ọgbakọ nke ọkpara nwere aha ha e dere heaven" (Ndị Hibru 12:23). "Ma ị bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà bụ, mba dị nsọ, a peculiar ndị mmadụ na-ekwusa ya dị ebube na-eme nke na-enye na-akpọ unu n'ọchịchịrị n'ime n'ìhè ya dị ebube." (1 Pita 2: 9) "Mmụọ na-agba àmà na anyị mmụọ nke na anyị bụ ụmụ Chineke." Anyị bụ ndị "a ememme ìgwè mmadụ, a ọgbakọ nke ọkpara nwere aha ha e dere heaven" (Ndị Hibru 12:23). "Ma ị bụ agbụrụ a họọrọ, òtù ndị nchụàjà bụ, mba dị nsọ, a peculiar ndị mmadụ na-ekwusa ya dị ebube na-eme nke na-enye na-akpọ unu n'ọchịchịrị n'ime n'ìhè ya dị ebube." (1 Pita 2: 9)
Vecka 29, onsdag 17 juli 2019 kl. 17:01